Adeegga jarista Air New Zealand ee USA, Canada, Argentina, Japan iyo UK
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Adeegga jarista Air New Zealand ee USA, Canada, Argentina, Japan iyo UK
Airlines • Airport • Jebinta Wararka New Zealand • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Wararka Jabinta Hawaii • News • Ammaanka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Air New Zealand, xubin ka tirsan Star Alliance ayaa sii yaraynaysa awoodda dhammaan shabakadeeda iyada oo ay ugu wacan tahay saameynta Covid-19 ee dalabka safarka.
Shabakaddeeda duulimaadka dheer ee Air New Zealand waxay hoos u dhigi doontaa awooddeeda boqolkiiba 85 bilaha soo socda waxayna ku shaqeyn doontaa jadwal ugu yar si Kiwis loogu oggolaado inuu ku laabto dalkiisa iyo inuu sii wado jidadka ganacsiga ee Aasiya iyo Waqooyiga Ameerika. Faahfaahin buuxda ee jadwalkaan ayaa lagula talin doonaa maalmaha soo socda.
Hoos udhaca awooda shabakada dhaadheer, shirkada duulimaadka waxay kugula talin kartaa inay joojiso duulimaadyada udhaxeeya Auckland iyo Chicago, San Francisco, Houston, Buenos Aires, Vancouver, Tokyo Narita, Honolulu, Denpasar iyo Taipei laga bilaabo 30 Marso ilaa 30 June. Waxay sidoo kale hakineysaa adeegyadeeda London – Los Angeles laga bilaabo 20 Maarso (ex LAX) iyo 21 Maarso (ex LHR) illaa 30 Juunyo.
Awoodda isku xirka Tasman iyo Jasiiradda Baasifigga ayaa si weyn hoos ugu dhici doonta inta u dhexeysa Abriil iyo Juun. Faahfaahinta isbeddeladan jadwalka ah ayaa lagu dhawaaqi doonaa dhammaadka toddobaadkan.
Dhinaca shabakadda gudaha, awoodda ayaa hoos loo dhigi doonaa illaa 30 boqolkiiba bilaha Abriil iyo Maajo laakiin ma jiraan waddooyin la laali doono.
Macaamiisha waxaa lagula talinayaa in heerarka aan horay loo arag ee jadwalka awgood aysan la xiriiri karin shirkada diyaaradaha ilaa ay ka duulayaan 48 saacadood ee soo socda ama ay u baahan yihiin in si deg deg ah loogu celiyo New Zealand ama dalkooda hooyo.
Madaxa Fulinta Greg Foran ayaa sheegay in inkasta oo shirkadaha duulimaadyadu ay wajahayaan culeys aan horay loo arag, haddana Air New Zealand ayaa ka wanaagsan meel ka badan inta badan si ay u maraan waddadeeda.
"Adkaysiga dadkeennu waa mid aan caadi ahayn oo waxaan si joogto ah ula yaabay dadaalkooda iyo sida ay u jecel yihiin macaamiisheenna," ayuu yidhi Mr Foran.
“Waxaan nahay shirkad duulimaad leh oo qiimo jaban, miisaaniyad adag, keyd fiican oo lacag ah, sumcad heer sare ah iyo koox maalin walba kor iyo hoos u socota Waxaan sidoo kale leenahay la-hawlgalayaal taageera. Waxaan sidoo kale wadahadal kula jirnaa Dowladda waqtigan. ”
Hoos u dhaca ku yimid safarka Air New Zealand waxay sii wadaa inay dib u eegis ku sameyso sicirkeeda waxayna ubaahan doontaa inay bilawdo howlaha dib uhabeynta jagooyinka joogtada ah iyadoo laqirayo doorka muhiimka ah ee iskaashiga ururada ay kuleeyihiin howshan.
“Waxaan hadda aqbalnay in bilaha soo socda ugu yaraan Air New Zealand ay noqon doonto diyaarad yar oo u baahan dhaqaale ka yar, oo ay ku jiraan dadka. Waxaan geynay tallaabooyin kala duwan, sida fasax la’aan mushahar iyo weydiisashada kuwa leh fasax dheeri ah inay qaataan, laakiin kuwani illaa hadda way socdaan. Waxaan ka shaqeyneynaa fursado dib-u-dejin loogu sameynayo qaar ka mid ah shaqaalaheena ku jira shirkadda duulimaadka iyo sidoo kale inaan taageerno ururada kale ”.
Mr Foran wuxuu leeyahay diyaaradda waxay si wax ku ool ah ula shaqeyneysaa madaxda afarta urur shaqaale ee waaweyn oo matalaya in ka badan 8,000 oo ka mid ah shaqaalaheeda si loo hubiyo natiijada saxda ah ee dhammaan shaqaalaha.
Waxaan jeclaan lahaa inaan u mahadceliyo kooxaha hogaaminaya ee E tū, AMEA, NZALPA iyo Federation of Air New Zealand Pilots sida ay ula macaamilayaan shirkada duulimaadka oo ay si wanaagsan u matalayaan danaha xubnahooda. Kuwani waa waqtiyo aan horay loo arag oo aan dhammaanteen ku khasbanaan doonno inaan dul marno. Waana iska cadahay hadaanan qaadin dhamaan talaabooyinka ku haboon si loo dhimo qarashka iyo dhaqaajinta dakhliga, diyaaradayadu kuma jiri doonto booska ugu fiican ee ay horay ugu socon karto marka aan marayno saameynta ugu xun ee Covid-19. ”
Iyada oo qayb ka ah dadaallada keydinta kharashka ee Air New Zealand, Guddiga Agaasimayaashu waxay qaadan doonaan boqolkiiba 15 mushahar dhimis illaa dhammaadka sanadkan.